Xulka qaranka Soomaaliya oo caawa guuldarro kala kulmay Jabuuti – Gool FM
(Jabuuti) 22 Luulyo 2019. Xulka qaranka kubadda cagta Soomaaliya ayaa guuldarro 1-0 kala kulmay dhiggiisa Jabuuti, ciyaar saaxiibtinnimo oo caawa ka dhacday dalkaasi Jabuuti.
Kulankan oo ahaa mid aad u xiiso badan ayaa wiilasha Ocean Stars ay soo bandhigeen kubbad aad u heer sarreysa oo isku dhii-dhiib ku dhisan taasoo ay ku qanceen dhammaan taageerayaasha u soo daawasho tagay ciyaartan.
Qeybtii koowaad ayaa lagu kala nastay barbaro goolal la’aan 0-0, wallow xulka qaranka Soomaaliya ay qeybta hore soo bandhigeen ciyaar qurux badan.
Markii dib la isku soo laabtay qeybtii dambe ee ciyaarta wiilasha kubadda cagta Soomaaliya ayaa dardar xooggan ku soo galay garoonka, iyagoo rabay inay gaaran shabaqa xulka Jabuuti, balse taasi ma aysan dhicin, iyaga ayaa laga dhaliyay gool madax ah.
Xulka Jabuuti ayaana la yimid goolkaas madiga ah uu ugu adkaaday xulka qaranka Soomaaliya, waxaana u dhaliyey laacibka lambarka 9-aad ee lagu magacaabo Mahdi Xuseen Mahabe, kulanka ayaana ku soo dhammaaday 1-0 ay guushu ku raacday xulka Jabuuti.
Si kastaba ha ahaatee, tani waxa ay ka dhigan tahay in tababare Bashir Hayrofrd uu la kulamay guuldarradii ugu horreysay, isagoo hoggaaminaya xulka qaranka Soomaaliya.
Xulka Soomaaliya ayaa kulankooda xiga waxa ay Jabuuti kula ciyaarayaan xulka Uganda kulan ka tirsan tartanka Chan Cup, 27 bishaan aynu ku jirno ee July.
“Waxaan fariin soo dhaweyn ah ka helay Suárez, balse Messi ma uusan sameynin” - Griezmann